အသက် ၉၄ နှစ်အရွယ် နာဇီ SS တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းကို ခုံရုံးတင် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး အသက် ၉၄ နှစ်အရွယ် နာဇီ SS တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းကို ခုံရုံးတင်
Former Auschwitz guard Reinhold Hanning is seen in court waiting for the continuation of his trial at the court in Detmold, western Germany,on April 28, 2016. The 94-year-old former Auschwitz guard is on trial for complicity in the murders of tens of thousands of people at the Nazi concentration camp. / AFP / POOL / Bernd Thissen (Photo credit should read BERND THISSEN/AFP/Getty Images)
အသက် ၉၄ နှစ်အရွယ် နာဇီ SS တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းကို ခုံရုံးတင်
အခု အသက် ၉၄ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ နာဇီ SS လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းကို စတုအော့ဖ် နာဇီ အကျဉ်းစခန်းအတွင်း အကျဉ်းသား ရာနဲ့ချီပြီး သတ်ဖြတ်မှုမှာ ကြံရာပါအဖြစ် ခုံရုံးတင် အပြစ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျာမနီ အနောက်ပိုင်း မူအင်စတာရှိ ဒေသတရားရုံးက အမည်မဖော်ပြတဲ့ အဲဒီ နာဇီ SS တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းကို စစ်ဆေးမှာ ဖြစ်ပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်စဉ် အသက် ၂၁ နှစ် မပြည့်သေးပါဘူး။ သူဟာ ၁၉၄၂ ခုနှစ်နဲ့ ၁၉၄၅ ခုနှစ်ကြားမှာ အကျဉ်းစခန်းအတွင်း ရာနဲ့ချီတဲ့ အကျဉ်းသားတွေကို သတ်ဖြတ်မှုမှာ ပူးပေါင်းကြံစည်တယ်လို့ စွပ်စွဲခံထားရပါတယ်။
စတုအော့ဖ် အကျဉ်းစခန်းမှာ ၁၉၄၄ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၁ ရက်နဲ့ ၂၂ ရက်မှာ ပိုလန် အကျဉ်းသား ၁၀၀ ကျော်၊ ၁၉၄၄ ခုနှစ် သြဂုတ်နဲ့ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ဂျူးအကျဉ်းသား ရာပေါင်းများစွာ အသတ်ခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသကျ ၉၄ နှဈအရှယျ နာဇီ SS တပျဖှဲ့ဝငျဟောငျးကို ခုံရုံးတငျ
အခု အသကျ ၉၄ နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈတဲ့ နာဇီ SS လုံခွုံရေး တပျဖှဲ့ဝငျဟောငျးကို စတုအော့ဖျ နာဇီ အကဉျြးစခနျးအတှငျး အကဉျြးသား ရာနဲ့ခြီပွီး သတျဖွတျမှုမှာ ကွံရာပါအဖွဈ ခုံရုံးတငျ အပွဈပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဂြာမနီ အနောကျပိုငျး မူအငျစတာရှိ ဒသေတရားရုံးက အမညျမဖျောပွတဲ့ အဲဒီ နာဇီ SS တပျဖှဲ့ဝငျဟောငျးကို စဈဆေးမှာ ဖွဈပွီး ပွဈမှုကြူးလှနျစဉျ အသကျ ၂၁ နှဈ မပွညျ့သေးပါဘူး။ သူဟာ ၁၉၄၂ ခုနှဈနဲ့ ၁၉၄၅ ခုနှဈကွားမှာ အကဉျြးစခနျးအတှငျး ရာနဲ့ခြီတဲ့ အကဉျြးသားတှကေို သတျဖွတျမှုမှာ ပူးပေါငျးကွံစညျတယျလို့ စှပျစှဲခံထားရပါတယျ။
စတုအော့ဖျ အကဉျြးစခနျးမှာ ၁၉၄၄ ခုနှဈ ဇှနျလ ၂၁ ရကျနဲ့ ၂၂ ရကျမှာ ပိုလနျ အကဉျြးသား ၁၀ဝ ကြျော၊ ၁၉၄၄ ခုနှဈ သွဂုတျနဲ့ ဒီဇငျဘာလအတှငျး ဂြူးအကဉျြးသား ရာပေါငျးမြားစှာ အသတျခံခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။
Previous articleဆရာဝန်ကို ရန်ပြုပြီး ရဲ ၂ ဦးကို ထိုးကြိတ်တဲ့ လူငယ် ၆ ဦးကို ဖမ်းဆီး
Next articleမိဘနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ဝိုင်းဝန်းထိန်းကျောင်းမှ ဆေးလိပ်နဲ့ ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲမှု ကင်းစင်မယ် (ရုပ်/သံ)